Fanitsiana teti-bolam-panjakana :: Nadinin'ny Filoha tsirairay ireo minisitra • AoRaha
Nanomboka afak’omaly ny fandalovan’ireo minisitra tsirairay teo anoloan’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, mikasika ny fanadihadiana any andinin’ny toe-bola nampiasaina nanomboka tamin’ity taona 2020 ity. «Tao anatin’ny Filankevitry ny minisitra no nanatanterahana an’io fifanatrehana io », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, Andriatongarivo Rakotondrazafy Lalatiana, omaly.
Nanontaniana an’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ny fandaniana ara-bola rehetra, miampy ny fampahafantarana ny toe-bola isak’ireo minisitera sy ny tetikasa efa vita ary izay mbola hotontosaina. « Samy niezaka niaro ny fandaharanasany avokoa ny tsirairay, sady namaritra mazava ny tetibola ilaina amin’izany », hoy ihany ny minisitra mpitondra tenin’ny governemanta.
Nitohy, hatramin’ny omaly, io fanadinana nataon’ny Filoha io. Novitaina, taorian’izay, ny fandrafetana farany ny fanitsiana ny Tetibolam-panjakana 2020 sy ny fankatoavana azy.
Efa nambaran’ny praiminisitra, Ntsay Christian, nandritra ny fihaonany tamin’ireo depiote teny amin’ny Ivon-toeram-pivoriana iraisam-pirenena (CCI) eny Ivato, fa tsy maintsy vitaina amin’ity faran’ny herinandro ity ny fanitsiana ny Tetibolampanjakana hampiasaina hatramin’ny faran’ny taona 2020.
Amin’io herinandro ho avy io no hatolotra an’ireo solombavambahoaka sy ireo loholona ny volavolan-dalam-panitsiana ny tetibola. Isan’ny teboka iray goavana ao anatin’izany ny famaritana ny teti-bola iadiana amin’ny tsimok’aretina « Covid19 ». Eo ihany koa ny fikajiana vola ilaina hoenti-manarina ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara.
Haiady taekwondo :: Hanana solontena amin’ny « Mondial » ampitain-davitra i Madagasikara